Sehatra fanapahan-kevitra horaisin'ny Bluecore ho an'ny eTail | Martech Zone
Sehatra fanapahan-kevitra horaisin'ny Bluecore ho an'ny eTail
Alahady, Jolay 9, 2017 Talata, Aogositra 18, 2020 Douglas Karr
Ianao no mpivarotra. Inona no hataonao manaraka? Ity dia fanontaniana apetraky ny mpivarotra amin'ny tenany tsy tapaka. Ny data ankehitriny dia mirotsaka amin'ireo fikambanana amin'ny hafainganam-pandeha sy ny habetsaky ny firaketana, ary ny fizotry ny fandaminana sy ny fanaovana an'io angon-drakitra io dia mety ho malemy.
Ho an'ny vao manomboka, ianao dia voatendry hahafantatra zavatra isan-karazany momba ny mpanjifanao:
Iza ireo mpanjifako sarobidy indrindra?
Iza ireo mpanjifako izay mividy entana misy fihenam-bidy ihany?
Iza amin'ireo mpanjifa no ho very aho?
… Ary mitohy ny lisitra.
Raha afaka manangona angon-drakitra misy fantsona maro ianao ary mahatsapa hoe iza ao amin'ny tobin'ny mpanjifanao, inona no ataonao manaraka amin'izany fampahalalana izany? Dikany, ahoana no fomba anaovanao izany? Ity ny drafitry ny haino aman-jery ataonao: Iza no kendrenao, amin'ny alàlan'ny fantsona inona no ampitanao ireo hafatra ireo ary oviana ianao no mihetsika? Ity halalin'ny fahalalana, fahitana ary fahaizana ity dia tsy azon'ny ankamaroan'ny mpivarotra.
Ho valin'ity fanamby misahana ny indostria ity, Bluecore, mpamatsy teknolojia SaaS efa-taona, dia nanambara ny Decisioning Platform vaovao ho an'ireo mpivarotra am-barotra hanampy amin'ny famaliana ny fanontaniana hoe "inona ny manaraka?" Ny interface tokana dia manome alalana ireo mpivarotra antsinjarany hitantana angona sy hiteraka mpihaino manerana ny fantsona, tsy misy idiran'ny IT.
Miaina ao anatin'ny tontolo manome fahafaham-po eo noho eo isika izay tsy ananan'ny mpivarotra fotoana firy. Ny fahitana ny hafainganam-pandeha sy ny fotoana tena izy dia lakilen'ny fandrefesana ny mari-pahaizana momba ny fahazoana, ny fiovam-po ary ny fitazonana ao amin'ny tontolon'ny varotra mifaninana ankehitriny. CRM ary Analytics fitaovana dia manolotra ny mpivarotra fahaizana manangona vaovao ho an'ity tanjona ity indrindra, fa ny fanangonana angon-drakitra fotsiny dia tsy mitondra valiny.
Ireo mpivarotra antsinjarany dia tsy mila data na fitaovana vaovao hanamafisana ny angona. Mila fanampiana amin'ny famaritana ny fironana amin'ny angon-drakitra izy ireo ary mila fitaovana manapa-kevitra hampiasana izany angona izany. Omeo hery ny ekipanao hanao zavatra mifanaraka amin'ny fantany momba ny mpanjifanao hahafahanao mamorona traikefa tena misy dikany amin'ny fotoana mety amin'ny dia lavitra.
Ireo mpivarotra dia tsy mila angona misimisy kokoa. Mila fanampiana izy ireo amin'ny fampiasana azy - izany no singa tsy hita ao amin'ny tsenan'ny marketing ankehitriny. Izahay dia namolavola ny sehatray hampiditra tsy misy fotony ao anaty valin'ny varotra efa misy, tsy misy fanampian'ny ekipa IT, ary miaraka amina mpampiasa interface tsotsotra mba hahafahan'ny mpivarotra manangana sy mampifangaro ny mpijery amin'ny fantsona ao anatin'ny segondra vitsy. Fayez Mohamood, mpiara-manorina ary tale jeneralin'ny Bluecore
Amin'ny maha-tambajotram-pifandraisana ao amin'ny stack marketing anao, ny Bluecore's Decisioning Platform dia mampifandray tsy misy fika ireo loharanom-baovao, toy ny CRM, katalaogim-bokatra ary sehatra eCommerce, miaraka amin'ireo teknolojia fantsona izay mifandray mivantana amin'ny mpanjifanao. Raha manao an'izany, ny sehatra dia manamboatra angon-drakitra marobe ao anatin'ny segondra, ka azo ampiharina avy hatrany ho an'ireo mpivarotra ny fananganana mpihaino, izay mety hahatafiditra ny mpanjifanao sarobidy indrindra, mpividy fihenam-bidy, mpanjifa saika hikorontana. Ireo mpivarotra dia afaka manaparitaka fampielezana manerana ny fantsona toy ny mailaka, sosialy, karoka ary eo an-toerana.
Mahazoa Demo Platform Bluecore Decisioning
Andao haka ohatra manokana avy amin'ny mpivarotra kiraro atletisma manerantany:
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpamorona eran-tany, mpivarotra ary mpaninjara kiraro sy fitafiana ary fitafiana ho an'ny fiainana andavan'andro, ity marika manerantany ity dia efa ela no nalaza tamin'ny fitarihana ny fironana nomerika sy ny nanolorany ny mpijery traikefa tena mahaliana - na amin'ny magazay na amin'ny Internet. Saingy toy ny tranga ho an'ny ankamaroan'ny mpivarotra an-tserasera, indrindra ireo izay miainga avy amin'ireo fikambanana lehibe misy fotodrafitrasa sarotra, fidirana ary fiasana haingana amin'ny angon-drakitry ny mpanjifa dia nanaporofo fa sarotra ho an'ny orinasa.
Mba hihoarana io fanamby io dia nitodika tany amin'ny Bluecore ilay mpivarotra:
Fakafakao sy fantaro ny haavon'ny fifandraisan'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny angon-drakitry ny mpanjifa amin'ny fotoana tena izy
Mandefasa mailaka voafitaka manokana, atiny media sosialy, doka aseho ary traikefa eo an-toerana
Saraho ny hevitry ny mpanjifa azo ampiharina ary hiteraka mpijery manokana amin'ny antsinjarany segondra miorina amin'ny angon-tantara sy ny algorithma mialoha
Ampifandraiso haingana ny mpihaino amin'ny alàlan'ny mailaka, fantsona sosialy sy eo an-toerana hanatanterahana fampielezan-kevitra marobe amin'ny fantsom-pifandraisana marobe nefa tsy asiana andraikitra amin'ny departemanta IT
Talohan'ny Bluecore, tsy nanana fidirana ampy amin'ny angon-drakitra mpanjifa izahay. Tsy afaka nanodikodina azy mora foana izahay na nanintona hetsika avy amin'izany. Tsapanay fa ny Bluecore dia tsy afaka nanampy anay hamaha ity olana ity ihany, fa azo vahana ihany koa raha tsy mavesatra ny departemantan'ny IT manerantany. Ity dia teboka fivarotana lehibe ho anay, satria ny interface Bluecore mora sy mora ampiasaina dia mamela anay hitazona ny fampielezan-kevitra amin'ny marketing tokony hisy - ao anatin'ny departemantan'ny marketing fa tsy eo am-pelatanan'ny departemantan'ny IT. Ny fahafahako mamerina ny fifehezana ny fampielezan-kevitray dia goavana. Tsy mbola nahita sehatra iray mora ampiasana na haingana ampiharina amin'ny fitaovana hafa rehetra izahay hatreto. Mpitantana zokiolona amin'ny CRM
Mampiasa ny Sehatra fanapahana Bluecore hamakafaka haingana sy hampifandray angon-drakitra, hiteraka mpihaino ao anatin'ny segondra ary hanatanteraka fanentanana miampita fantsona manodidina ny famoahana vokatra vaovao. Manokana, ny marika dia nahazo tombony tamin'ny tranga fampiasana telo lehibe:
Fampitomboana ny fifehezana ny marketing sy ny fahazoana data
Alohan'ny hampiharana ny Bluecore, ny fananganana fanentanana mailaka dia nitaky ny fanampian'ny departemanta IT an'ny orinasa ary mety maharitra 40 ka hatramin'ny 60 andro vao manomboka. Miaraka amin'ny Bluecore, na izany aza, ny ekipa marketing dia afaka manandrana sy mampihatra ny fandaozana kendrena sy ny tsimok'aretin'olom-bitsy izay niteraka fanentanana mailaka tao anatin'ny andro.
Ho fanampin'ny fanampiana amin'ny fisorohana ny fampidirana IT mandany fotoana sy sarotra, ny Bluecore koa dia nanamora ny fampidiran'ireo mpivarotra izany fampielezana izany tamin'ny mpiara-miasa teknolojia hafa. Ohatra, ny ekipa marketing dia afaka manao fampielezan-kevitra kendrena amin'ireo mpividy lafo vidy any amin'ny tanàna lehibe (ie Boston, New York City, Los Angeles) ary mampifangaro ny angona miaraka amin'ny Handstand Fitness App hanolorana ireo mpiantsena amin'ireny jeografia ireny ho fanofanana manokana. .
Ny valiny lehibe tamin'ireto ezaka ireto dia nahitana:
Ny fahaizana mamantatra mpanjifa marobe eo an-toerana ary mandefa fampielezan-kevitra amin'ny marketing bebe kokoa miaraka amin'ny Bluecore raha ampitahaina amin'ny sehatr'ilay mpivarotra teo aloha, SaleCycle
Ny tahan'ny fisokafana sy tsindry avo kokoa miaraka amin'ny Bluecore noho ny an'ny SaleCycle, ary amin'ny farany dia hiverina amin'ny famerenam-bola 10: 1
Fanatsarana ny fampiroboroboana ny marika Omnichannel
Rehefa tsapan'ilay mpivarotra fa ilaina ny mandrindra ny fifandraisana tsy miova amin'ny fantsona dia nitodika tany amin'ny Bluecore izy mba hahazoana fanampiana. Ny marika dia nanomboka ny ezaka fampiroboroboana omnichannel tamin'ny alàlan'ny fananganana kiraro vaovao amin'ny tsipika kiraro atletika malaza. Ho fanombohana, ny orinasa dia nampiasa ny Bluecore's Decisioning Platform hananganana mpijery azy amin'ny fotoana tena izy miaraka amina fiakarana avo hividy vokatra avy amin'ny tsipika kiraro. Avy eo dia nanolotra traikefa manokana sy an-toerana ho an'ity mpijery ity tamin'ny alàlan'ny fampiasàna Bluecore hiasa tsy misy fotony miaraka amin'ireo sehatra fanamoriana ao an-toerana sy hanitsiana ny famoronana pejy fandraisam-bahiny hanehoana ilay kiraro vaovao sy ireo vokatra hafa mitovy andalana. Ny orinasa dia nandray an-tanana ireo ezaka ireo tamin'ny alàlan'ny fanolorana fananana mitovy amin'ny famoronana ao anaty dokambarotra Facebook sy amin'ny alàlan'ny fampielezana marketing amin'ny mailaka amin'ireo mpiantsena ireo izay manana fifandraisana akaiky amin'ny fividianana araka ny notondroin'ny Bluecore.
Mba hanitarana ny androm-piainan'ny hetsika fanentanana sy hitazomana ny atiny ho an'ny mpanjifa sarobidy indrindra, ny ekipa koa dia nanolotra tosika manokana ho an'ireo mpitsidika miverimberina sy ireo mpanjifa nahazo hafatra fandefasa fanindroany izay nanolotra fidirana maimaim-poana amin'ny iray amin'ireo hetsika manerantany lehibe indrindra an'ny orinasa.
Fiakarana 76% amin'ny tsindry ho an'ny atiny namboarina
Nampitombo ny fiovam-po mihoatra ny 30% amin'ny fandaozana sarety ho an'ny fampielezan-kevitra izay nahitana ny fanentanana ny fidirana hetsika maimaimpoana
Famantarana mpihaino vaovao kendrena amin'ireo fantsona rehetra
Bluecore dia nanampy ny mpivarotra tamin'ny fandraisana andraikitra hampitombo ny mpihaino azy amin'ny fantsom-baovao amin'ny alàlan'ny fanaovana fampielezan-kevitra ara-tsosialy mifamatotra amin'ny famoahana vokatra vaovao manaitaitra. Nampiasà ny Bluecore's Decisioning Platform amin'ny fotoana tena izy, ny orinasa dia nanangana mpihaino nijery ilay vokatra vaovao tao anatin'ny 60 andro farany fa tsy nividy ary nikendry azy ireo tamin'ny alàlan'ny doka Facebook.
Amin'ny ankapobeny, ny Bluecore's Decisioning Platform dia nanampy ny ekipa mpivarotra an'ity mpivarotra ity hifehy ny angon-drakitry ny mpanjifa, hanao izany data izany ary hampiasainy amin'ny fomba marani-tsaina sy manokana hanatsarana ny fahombiazan'ny fantsona rehetra. Hatramin'ny niarahany niasa tamin'ny Bluecore, dia fantatry ny mpivarotra fa ny fanatrarana ireo valiny ireo dia tsy ny fametrahana ireo tendrombohitra angon-drakitra ho an'ny toerana iray. Fa kosa, ny fitondrana ny fizotran'ny fanapaha-kevitra izay hatao amin'ireo rehetra ireo amin'ny sehatra iray.
Miaraka amin'ny Audiens Insights, ny mpivarotra eCommerce dia mahazo fidirana amin'ny solaitrabe haingana indrindra sy lalindalina ho an'ny indostria mba hahitana ny fomba fiasa sy ny vokatra mifototra amin'ny sehatra mpihaino nofidian'izy ireo noforonina. Raha vantany vao mamorona mpihaino ao amin'ny Bluecore ny mpivarotra, dia afaka miditra amin'ny Audiens Insights izy ireo izao mba haka sary an-tsaina hoe ahoana no faminaniana ny fizarana iray hanovana sy hampiova fo, ary avy eo hamolavola fampielezan-kevitra sy paikady hampitomboana ny vokatra.
Miaraka amin'ny Audiens Insights, ny mpitarika marketing dia afaka mianatra ny fomba fiasan'ny ampahan'ny mpanjifa sarobidy indrindra mifandraika amin'ireo vondrona mpanjifa hafa, sy ny fizotry ny fampielezan-kevitr'izy ireo amin'ireo mpijery ireo. Ireo mpivarotra dia afaka mamakafaka an'ity data ity isan-kerinandro ary mandrafitra ny paikadin'ny varotra mifanohitra amin'ireo ampahan'ny mpanjifa.
Ny takelaka Audiens Insights dia mamaly fanontaniana toy ny:
Inona ny sandan'ny mpihaino? Jery ​​todika amin'ny isan-jaton'ny karama ankapobeny, salan'isa momba ny lamandy (AOV), salan'isa isan'ny vokatra isaky ny filaminana, sanda antonony mandritra ny androm-piainana ary salan'isan'ny androm-piainana voalaza mialoha
Inona ny fahasalaman'ity mpanatrika ity? Fanaparitahana ny mpanjifa very, mavitrika ary atahorana
Aiza no ahafahako mifandray amin'ity mpihaino ity? Ny antsipiriany momba ny isan'ny mpanjifa amin'ny mpihaino iray manokana dia azo tratrarina amin'ny fantsona iray nomena, toy ny mailaka, sosialy, fampisehoana na eo an-toerana
Ahoana no fandraisan'ny mpihaino azy vokatra? Mampiseho ny vokatra "Rockstars", "omby vavy" ary "vatosoa miafina"
Ahoana ny fandraisan'ity mpihaino ity tranokala ity? Mahafantatra mora ny fironana amin'ny hetsika, ny fantsom-pivadihan'ny tranokala ary ny fampitahana ny hetsika amin'ny tranokala
Ahoana ny fandraisan'ny mpihaino anjara amin'ny mailako? Fijery amin'ny antsipiriany momba ny mailaka natolotra, nisokatra ary ni-tsindry, ary koa ny famoahana tsy miankina amin'ny fizarana mpihaino tsirairay
Iza no mpanjifa mahaliana indrindra? Fijery tsy mitonona anarana ho an'ny mpanjifa tsirairay ravan'ireo "mpandany vola be", "mpitety ambony" ary "mety indrindra"
Vakio bebe kokoa momba nyawangin'ny mpijery
Tags: fahitana ny mpihainobluecorefanapaha-kevitraamin'ny fotoana katroka